Who is Michael Kyaw Myint??? - All Things Myanmar Burmese
Previous: « IC
Next: Model Su Myat Phoo »
Myanmar Blog » Articles, Asia Entertainment, Knowledge Base, Myanmar/Burmese » Who is Michael Kyaw Myint???
Who is Michael Kyaw Myint???
Invitation to Myanmar Thingyan Celebration at Clementi, Singapore
Invitation to Myanmar Thingyan Celebration at Clementi, Singapore Date: 18 April 2010 Time: 4pm
Lyrics of Rihanna’s Unfaithful Story of my life Searching for the right But it keeps
Rain’s Asia Tour
A J-Tune Entertainment representative stated, “Rain’s schedule for the latter half of
Wut Hmone Shwe Yee without makeup
ဒီမိုက်ကယ်ဆိုတာ ယ္ခ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ဆွေဆွေစံ
လူလိမ် လူညာ လူပွဲစားတစ်ယောက်ပါ။
KNUနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်စားတာပါ။မိန်းမလဲရှုတ်တက်ပါသေးတယ်။KNUထည်းက ကိုသားကြီးတစ်ယောက်တော့မှတ်မိပါတယ် ကျန်လူတွေတော့မသိတော့ပါဘူး။ဒီကောင်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့် ၂၀၁၃ /၁၀လပိုင်းမှာ ကျော်တို့ထိုင်းကိုတက်မဲ့ လူအရောက် ၁၅၁ တစ်ယောက်ပို့ပါတယ်။၁၅၁ယောက်အဖွဲ့ထဲ ကျနော်တို့
ဒီကောင်အကြွေးပါတ်လည်ဝိုင်းပြီးတော့ မြောက်မီးခဲကိုင်မိထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့။၂၀၁၃ နှစ်ထဲမှာပဲ ထိုင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်မဲ့လူ ၃၀၀ လောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဦးစောင်ပြီးတော့ အလုပ်သမားတွေရဲ့လက်ဗွေစာရင်းမရ ရကောင်းမလားဆိုပြီးဆန္ဒထွက်ပြတယ် ခွင့်ပြုမိန့်မရှိပဲ
သွားပြတော့ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ထောင် ၆ လကြပါတယ်။
လူအယောက် ၃၀၀ ဟာသူထောင်ကြနေတော့သွင်းထားတဲ့ငွေကြေးပြန်တောင်းတဲ့သူရှိသလို မတောင်းပဲ သူထောင်ကထွက်တဲ့အထိ
တော်တော်များများဟာ သူ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်။ကျော်တို့အဖွဲ့တုမ်းကဆိုရင် သူပို့တာကတစ်နေရာ ရောက်သွားတာက တစ်နေရာ ဒီလိုပါ “လင်မယားအတွဲတွေက ရေသန့်စက်ရုံ မိန်းမပျိုလေးတွေက ငါးခေါင်းကြိုးစက်ရုံ ယောင်္ကျားလေးသီးသန့်က
ဆီစက်ရုံနဲ့ စောက်လုပ်ရေးဆိုပြီးပို့လိုက်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်နယ်ထဲရောက်ပြီပေါ့ စရောင်းတော့တာပဲ လမ်းခုလပ်မှာတင် ၂၀ ရောင်း ၁၅ ယောက်လောက်ရောင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။လမ်းခရီးဟာ မဲစောက်ကစထွက်လိုက်တာ
လူတွေကိုဟင်းရွက်ကစွန်းရွက်တွေလိုပဲလိုက်ရောင်းပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုင်ရင်အများကြီးပါပဲ မိုက်ကယ်ပေးလိုက်ဒုက္ခတွေကိုတော်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျ။နှစ်ရက်နဲ့တစ်နေ့ ကားပေါ်နဲ့ဆီဆိုင်ပလပ်ဖေါင်းတွေဟာ မိုက်ကယ်ပေးလိုက်တဲ့ ကျော်တို့အိပ်ဆက်ရာနေရာပေါ့။သူပြောလိုက်တဲ့စက်ရုံနဲ့ ရောက်သွားတဲ့နေရာဟာလားလားမှမသတ်ဆိုင်ပါ။
ဆူလဌါနီဆိုတဲ့ ရာဘာစက်ရုံကို ထိုင်းကပွဲစားမကရောင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ကျော်ကိုယ်တိုင်
၁၅၁ယောက်သောအလုပ်သမားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီး သပ်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုဖုန်းဆက်အကူညီတောင်းရပါတယ်။အဲ့ညမှာပဲ ထွက်ပြေးတဲ့လူက အယောက်၅၀ကျော်ပါတတယ် မိုက်ကယ်ပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့။တိုတိုပဲပြောပါတော့မယ်
အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်စားလေ့ရှိပါတယ် မြဝတီမှာနေလို့မရတော့လို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်ကိုပြောင်းပြေးပါတော့တယ်။ဒီကောင်ဟာ ဘာKNUမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကျနော်ရဲရဲကြီးပြောရဲပါတယ်။ဒီကောငိ့တစ်ချို့လူပွဲစားလေးတွေ တော်တော်များများလဲ ဘဝပျတ်ရတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။၁၀ယောက် ပွဲစား ၅ ပွဲစားသမားတွေက သူ့အကြောင်းပိုသိတာပေါ့ဗျာ။ဂဃနဏပြောချင်တာဗျ
KNU ကကောင်က ခြေထောက်ကို သေနပ်နဲ့ချောင်းအပစ်ခံရဘူးတဲ့သူတဲ့ ဟားဟားရီချင်တယ်
တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့ သေရတော့မှာသိလို့ ရန်ကုန်ကိုပြေးတာ အမြှီးကိုတန်းနေတာပဲ။
+66094 334 8346
Via>ko tun wai
Guess who: Who is this Myanmar celebrity?
Facebook of Myanmar celebrities, Thet Mon Myint, Eaindra Kyaw Zin, Myint Myat and more…